Ideas de paleta de colores Hordhaca Palette Midabka
Hordhaca Palette Midabka
Istaraatiijiyadaha Midab-La’aanta ee ‘Ruthless’
Guud ahaan, guduudku wuxuu la xiriiraa xikmadda, hal-abuurka, madax-bannaanida, sixirka iyo sirta. Ku haysashada guduudan hoos yimaad xukunkeena (farshaxanimada) waxay umuuqataa inay adkayd. Talada cagaaran ee caafimaadka iyo lacagta, iyo guduudku waxay soo jeedinayaan xigmad, boqornimo iyo ixtiraam. Guduudkaygu maahan buluuggaaga. Sababta oo ah guduud waxaa loo sameeyay isku darka midabada diiran iyo qabow, waxay haysaa labada guri. Midabka buluuga ahi si dhif ah ayuu uga dhacaa dabeecadda oo sababtuna tahay waxa badanaa loo arkaa inay tahay macno muqadas ah. Midabka sare ee guduudka ah (oo laga helo inta u dhaxeysa casaanka iyo buluuga giraaniga midabka) iyo hooska cawlan ayaa labadaba dhalaalaya buluugga koowaad iyo kan diirran ee casaanka ah oo wadajira.
Xulashada Palette Midabada Sare
Mar alla marka aad dejiso midabada, oo ay dadku ogaadaan astaantaada, waxaad u egtahay inaad ku xasuusato midabkaas. Dadka badankood waxay oran lahaayeen buluug waa midabka ay jecelyihiin. Maaddaama ay tahay midabka ugu jecel dadka badankood, waxaad isla markiiba rafcaan u qaadan kartaa dhagaystayaal ballaaran. Midabada khafiifka ah waxay ugu fiican yihiin asalka oo leh midab aad u mugdi badan qoraalka laftiisa. Waxay kufiican tahay midabada odhaahda ah, wicitaanada ficil, ama meelkasta oo ay rabaan inay dadku soo jiitaan. Ugudambeyn, waxay naqshadeeyaan midabyo aftahan ah oo u muuqda kuwo aan dan yar ka lahayn inta badan.
Palette Midabka – Sheekada
Sida loo doorto midabka saxda ah ee dalabkaaga Sida loo doorto midabka saxda ah ee dalabkaaga Aqoonso dareenka dhagaystayaasha In kasta oo midabada qaarkood ay macno guud u leeyihiin, midabbo badan ayaa leh aragtiyo maxalli ah oo kala duwan. Midabyada dalabka waa iney ahaadaan kuwo isuduwe ah iyo waxa ku jira codsiga iyo ujeeddada. Midab qaldan oo macno u leh dalabkaaga ayaa kuu horseedi kara natiijooyin masiibo ah.
Sidee looga bilaabayaa Palette Midabka?
Dadku meesha koowaad ayey u arkaan midab, sidaa darteed waxkasta oo kale waa kan labaad. Dabcan, waxaad dooneysaa inaad doorato midabada aad runtii jeceshahay. Midabku wuxuu leeyahay muuqaal dabiici ah oo aan dabiici ahayn kaas oo ka dhigaya kulankiisa u gaarka ah dabiicadda si iskumaan ah. Midabada qaarkood waxay beddeli karaan niyaddayada, ama xitaa waxay saameyn karaan xaaladdeena jidheed. Midab dhammaystiran oo dhammaystiran iyo falsafad ayaa noqon doonta aalad is-suuqgeyn dalabkaaga.
Taariikhda Qoraalka Midabiska La Yaabay
Marka booqdayaasha cusubi soo galaan bartaada, waxyaabaha ugu horreeya ee ay turjumaan waa midabbo. U isticmaalida midab si aad u xoojiso qol, guri ama dhisme xafiis waa hab sahlan oo lagu horumariyo tamarta deegaankaaga iyo gaar ahaan adiga. Waxaa loo adeegsadaa si miyir leh u iftiimiyaa gariirka ula kaca ah ee adduunka. Midabada calaamadaha dalabka waa inay ku muujiyaan utility cod weyn oo cad.
Sida loo Doorto Midabka Palette
Cusboonaysiinta palette midabaynta jikadaadu qasab maaha inay noqoto mid ballaaran. Palette midabku waa aasaasiga xulasho ahaan 2 ama 3 midabo oo loo isticmaali karo meelkasta oo summadaadu leedahay. Qormadeena midabaynta waxay soo bandhigaysaa muuqaal mideysan dhammaan warbaahinta, oo ay ku jiraan agab daabacan, alaabada xayeysiinta iyo meelaha internetka. Waa inaad qeexdid palette midabkaaga una xaddid midabada saddex. Muuqaalka midabeeca LABAAD PALETTESA taageerada midabka waa loo ogolyahay isticmaalka xadidan.
Marka xigta, waxaan sharixi doonaa hababka ay tahay inaad u adeegsato sawir qaade midabka soosocda sida soo socota:
1. Guji ‘Xulo “Sawirkaaga dooro”, ka dibna dooro sawirka aad rabto inaad ogaato koodhka midabka iyo culayska.
2. Ku qor magaca sawirka khaanadda bannaan, ka dib “Gali magaca magaca”
3. Markaas guji “dir”
Taas ka dib, taxanaha midabaynta ugu badan, tusaalooyinka midabka, midabada hexadecimal, midabada RGB iyo magacyada midabku way wada dhammaystiran yihiin oo miis ayey ku wada dhammaystiran yihiin.
Sidee ?? Way fududahay, sax?
Isku day inaad sawiro inta ugu badan ee aad haysatid. U fiirso natiijooyinka isugeynta midabada ee lagu soo saaray miiska. Sawirka aad soo gelisay wuxuu muujinayaa dhamaan midabada badan, midabka hexadecimal, midabka RGB iyo waliba magaca midabka.
Esta "Hordhaca Palette Midabka" el gráfico tiene 20 colores dominados, que incluyen . Hace una combinación de colores tan hermosa inspirada en esta imagen.